तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या ? « News24 : Premium News Channel
मृतक सीता पौड्याल
श्रीमानका साथमा मृतक सीता
घटना राति २ बजे देखि ५ बजे भित्रको भएको देखिन्छ । एउटै कोठामा सुतेकी श्रीमती सीता यदि आत्माहत्या गर्न लागेको भए श्रीमान चाँहीले बचाउने प्रयास गर्न पर्ने कि नपर्ने ? बचाउनकै लागि डोरी पासो काटिएको हो भने श्रीमतीको ज्यान गइसके पछि परिवारका सदस्य र टोल छिमेकलाई खबर गर्ने कि घर छाडेर भाग्ने ?
उनले भदौ ६ गते नै तानसेनबाट गाडीमा बोकेर श्रीमतिलाई तिज मान्ने गरि माईतीमा छाड्न आए पछि फेरी एक्कासी किन बोलाए त्यस साँझ ? कतै योजनाबद्ध त थिएन ? झुण्डिएर मृत्यु हुने मानिसहरुको प्राय मुखबाट रगत बगेको नदेखेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, सीताको मुखबाट रगत निकै बगेको देखिन्छ । शरीरका विभिन्न भागमा निला डामहरु देखिन्छ । झुण्डिएर कि घाँटी कसिएर मारियो ? यस विषयमा माइतीलाई डाक्टरले झुण्डिएर आत्माहत्या गरेको रिर्पोट दिएको भन्दै त्यसैमा टेकेर प्रहरीले किटानी जाहेर लिन मानेन ।
कतै माथील्लो दवाव त छैन ? माइतीजनले यस्तो आशंका गरेका छन् । श्रोतका अनुसार आरोपी ज्वाँईका एक जना आफन्त नेपाल प्रहरीको माथील्लो पोष्टमा रहेका छन् । आरोपित परिवार निकै पैसावाला पनि हुन् ।
झुक्काएर आधा उमेर कान्छि बिवाह
माइतीजन भन्छन्- दुई वर्ष अघि मागी विवाह गरियो । स्टिल बडि भएको हेर्दा उमेर पुगेजस्तो नलाग्ने, केटा कन्य नै होला भन्ने ठानियो । तर पछि बुझ्दै जाँदा उनले पहिला नै विवाह गरेका रहेछन् । पहिलाकीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर यता अविवाहित हुँ भन्दै झुक्काएर २५ वर्षकी हाम्री चेलीलाई ४० बर्ष नाघेका उनले झुक्काएर विवाह गरेको थाह पाइयो ।
मृतक सिताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारी भने भक्कानिँदै रुँदै भन्छन्–‘मेरी छोरीलाई मारेकै हुन् । उसले आमासँग भन्ने गर्थि रे–‘साँझ रक्सीले टिल परेर आएपछि बसि खानु हुन्न आमा ।
अन्ततः बुधबार प्रहरीले आत्माहत्या दुरुत्साहनको मुद्धा दर्ता गरेपछि धर्ना कार्यक्रम तितर विवतर भएको छ । तर, पनि माइतीजन पक्ष भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरु कानुनी सल्लाह लिँदै र भोलिदेखि विभिन्न सरोकारवालहरु कहाँ न्यायका सन्दभर्मा छलफल गर्न जाने कार्यक्रम बनाएका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डिएसपी मदन कुँवरले आत्मा हत्या दुरुसाहनको मुद्धा दर्ता गरिएको र हत्याको पाटोबाट पनि अनुसन्धान हुने बताए । उनले उनका श्रीमानलाई नियन्यन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भईरहेको बताए ।
मृतक सीताको परिवार गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका ५ वस्तु का हुन् । उनीहरु रुपन्देहीमा बसाइसराई गरे पनि आवत जावत गरिरहेका थिए ।